काँठमा अव्यवस्थित बस्ती बढ्दै- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
काँठमा अव्यवस्थित बस्ती बढ्दै
आश्विन ३, २०७५ शिल्पा कर्ण
काठमाडौँ — तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. १ को धेरै क्षेत्र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) भित्र पर्छ । यससँगै जोडिएको ग्रामीण भेग ढकालचौरको सबैभन्दा माथि अढाईतले घर छ । ‘त्यो जग्गा निकुञ्जको स्वामित्वमा पर्छ । ४ वर्षजति भइसक्यो यो घर बनाएको,’ स्थानीय एक युवाले भने ।
उक्त घर ठेक्कापट्टा गर्ने रमेश तामाङ नामक व्यक्तिको रहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘त्यो घर जनप्रतिनिधि आउनुअगावैको हो,’ वडाध्यक्ष विदुर सापकोटाले भने, ‘यस क्षेत्रमा टहरा र अन्य संरचना पनि थुप्रै छन् । जसको लेखाजोखा स्थानीय तहसँग छैन ।’ ती अस्थायी संरचना पनि बिस्तारै स्थायी बन्ने क्रम जारी छ । उक्त नगरको विकट मानिने उक्त वडाको माथिल्लो इलाकामा नयाँनयाँ घर बनिरहेका छन् । तर, यसरी अव्यवस्थित बस्ती विकास भइरहँदा नगरपालिका भने त्यसलाई नियन्त्रण र कारबाही गर्न अक्षम देखिएको छ ।
वडाध्यक्ष सापकोटाका अनुसार ठूलो क्षेत्रफल ओगट्ने उक्त वडामा सार्वजनिक जग्गा निकै धेरै छ र अतिक्रमणमा परेको पनि उनी स्विकार्छन् । तर, नगरपालिकामा पटकपटक यो विषय उठाए पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको वडाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । ‘सुकुम्बासी धेरै छन् । उनीहरू व्यवसाय दर्ता गराउन आएका छन् । तर, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नहुँदा त्यो गर्न सकिएको छैन,’ सापकोटाले भने ।
उक्त नगरका वडा नं. १, २, ३ र ५ मा अहिले खासै बस्ती विकास भइसकेको छैन । कृषियोग्य जग्गा धेरै छन् । तर, पछिल्लो समय खेतमा जथाभावी घर बनाउने क्रम चलिरहँदा नगरपालिका त्यसलाई व्यवस्थित बस्तीका रूपमा विकास गर्न सकिरहेको छैन । कतै सडकको मापदण्ड मिचेर त कतै ढल, खानेपानीजस्ता सुविधा पुर्‍याउन नसक्ने ठाउँहरूमा समेत घर बनिरहेका छन् ।
उक्त नगरको वडा नं. ५ को स्थिति पनि उस्तैउस्तै छ । वडाध्यक्ष वासु गौतम दिनहुँ नक्सापासको सिफारिस लिने ८/१० जनासम्म पुग्ने गरेको बताउँछन् । ‘यो नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी भूकम्पपीडित भएकाले घर बन्ने क्रम बढेको हो,’ गौतमले भने, ‘त्यसबाहेक पनि पक्की संरचना धेरै नै बढिरहेका छन् । बस्ती विकास निकै तीव्र छ ।’ उनले स्थानीयका साथसाथै नेपालका विभिन्न भागबाट जग्गा किनी घर बनाउनेहरू बढिरहेको बताए ।
गौतमका अनुसार पहिले नै जग्गा किनिसकेका व्यक्तिको हकमा नगरपालिकाले तोकेभन्दा कम सडक भए पनि नक्सापासका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ । १३ फिटभन्दा कम सडक छोडेका घडेरीलाई नक्सापास नगर्ने नगरपालिकाको नीति भए पनि त्यहाँ पहिले जग्गा किनेकालाई ८/९ फिट बाटो भए पनि नक्सापास गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उक्त नगरको वडा नं. ३ मा ३३ सय रोपनी र वडा नं. ५ मा १७ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा छ । ५ नं. वडाका सार्वजनिक जग्गा स्थानीयले नै संरचना बनाउँदै च्याप्दै गइरहेका छन् । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने योजना बनाइरहेको र केहीलाई पार्क बनाई संरक्षणसमेत गरिरहेको गौतमले जानकारी दिए । उनले भने, ‘४ ठाउँमा गरी १७ रोपनी जग्गा फिर्ता गराइसक्यौं । एक ठाउँमा पार्क बनिसक्यो, अर्को बन्ने क्रम जारी छ ।’
उक्त नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘वडाध्यक्षहरूमार्फत सार्वजनिक जग्गामा बस्नेलाई स्ववासी बनाउन दबाब दिइने गरेको छ । अतिक्रमण हटाउनुको साटो उल्टै तिनलाई वैधानिकता दिइने गरिएको छ ।’ ती कर्मचारीले जनप्रतिनिधिले राजनीतिक फाइदाका कारण अनधिकृत संरचना भत्काउन आनाकानी गर्ने, कानुनविपरीतका काम भए पनि चुप लागेर बस्ने गरेको आरोप लगाए । यसैकारण सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन समेत नसकिरहेको ती कर्मचारीले बताए ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका भित्री र ग्रामीण इलाकामा पनि जथाभावी संरचना बन्ने क्रम जारी छ । वडा नं. ५ मा केही दिनअघि पहिरो गयो । पहाडको ठूलो हिस्सा खस्न लाग्दा तलतिरका दर्जनभन्दा बढी घर पुरिने जोखिममा छन् । वडाको उक्त स्थानमा बलौटे माटोमाथि वृक्षरोपण गर्नुपर्नेमा प्लटिङ गरी बस्ती विकास गरिएकाले पानीको व्यवस्थापन हुन नसकेर पहिरो गएको भूगर्भविद् बताउँछन् । त्यहाँ न वैज्ञानिक ढंगले निर्मित सडक छ न त ढलको उचित व्यवस्थापन ।
त्यहाँ पुरानो बस्ती भए पनि कच्ची घर थिए । अहिले पक्की संरचना बनिरहेका छन् । उक्त वडाका अध्यक्ष विजय तामाङ भन्छन्, ‘पहिले बनेका घर नक्सापास छैनन् । त्यतिखेर चलन थिएन । भूकम्पपछि बनेका ७५ प्रतिशत जति घर नक्सापास गराइएका छन् ।’ कीर्तिपुर, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका भित्री इलाकामा अझै घर बनाउनुअघि माटो परीक्षण र नक्सापास गराउने चलन छैन । जग्गाको प्रकृति नहेरी गरिएको निर्माणमा प्राकृतिक प्रकोपको असर बढी पर्न सक्छ । यद्यपि अहिले चेतनाको स्तरमा वृद्धिसँगै नक्सापास गराउने पनि बढैछन् ।
सहरी पूर्वाधारविद् यसरी अव्यवस्थित रूपमा बढ्दै गएको बस्तीले भविष्यमा विपद् निम्त्याउने बताउँछन् । आगलागी हुँदा दमकल जाने, एम्बुलेन्स जाने पर्याप्त चौडाइ नछुट्याई बनाइएको सडकले भविष्यमा नराम्रो असर गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बढ्दो बस्ती र जनसंख्यालाई ध्यानमा राख्दै निर्माण कार्य गर्नुपर्ने विकासविद् सुझाव दिन्छन् । ढल निकाससमेत नभएका क्षेत्रमा घर बनिरहेका छन् । यसले पानीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा र जथाभावी घर थपिँदै जाँदा नगरपालिकालाई नै गाह्रो हुने निश्चित छ ।